ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 01/09/08
စင်္ကပူ လူလိမ်ပွဲစား အကြောင်း
ဒီပိုစ့်လေးကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာက အလုပ်လာရှာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အသိပေးချင်တဲ့ အနေနဲ့ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.. ရေးသားပေးတဲ့ တန်ခူးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အဲဒီအေးဂျင့်ကိုလည်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးပါတယ်.. ကျွန်တော်က ၁၂ကျပ်ပေးလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူး.. ၂၀ပေးလိုက်ရတာ..း(မြန်မာတွေကိုပဲ ရွေးလုပ်သည် ဆိုတော့ အတော်ခံပြင်း ဒေါသထွက်သွားသည်။ အဲဒီလို ကလိန်ကကျစ်နည်းဖြင့် မသိနားမလည်သော သူတွေဆီက ခေါင်းပုံဖြတ် စီးပွားရှာတာတော့ အတော်ရုပ်ဆိုးလွန်းသည်။ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ ကျွန်မအိမ်မှာတည်းပြီး အလုပ်ရှာနေသည့် မိတ်ဆွေညီမလေး ဟိုတနေ့က အင်တာဗျူးခေါ်သည့် အီးမေးလ်ရတော့ အတော်ပျော်သွားသည်။ ပထမဆုံး အင်တာဗျူးဆိုတော့ ပျော်ပေမပေါ့။ ခဏကြာတော့ သူနဲ့ အတူ အလုပ်ရှာနေသည့် သူ့ မောင်လေးပါ ဆင်တူ အင်တာဗျူးခေါ်သည့် အီးမေးလ် ရတော့ နဲနဲတော့ သံသယ၀င်သွားသည်။ သိပ်မပျော်နေနဲ့ဒါအေးဂျင့် ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့သတိပေးရသည်။ နောက်နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ သူတို့ နှင့် မရှေးမနှောင်းလာသည့် သူငယ်ချင်းပါ တနေရာထဲမှ ဆင်တူ အီးမေးလ်ရသည်ဟု ဖုန်းဆက်လာပြန်သည်။ သံသယက ပိုပိုကြီးလာပေမယ့် သူတို့စိတ်ဓါတ်မကျအောင် သွားကြည့်လိုက်ပေါ့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ရသည်။အိမ်က ညီမလေးက ကံဆိုးစွာ အရင်ဆုံးသွားရသည်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်ဆင်ပြီး သေချာပြင်ဆင်သွားသည်။ သွားခါနီး မြန်မာပြည်က အမေတောင် ဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းကန်တော့ကာ ဆုတောင်းပေးဖို့ မှာလိုက်သေးသည်။ သူ့ခမျာ အမေအိုကြီး လုပ်ကျွေးချင်လို့ထွက်လာတာ အလုပ်မြန်မြန်ရပါစေလို့ကိုယ်တောင်ဝင်ဆုတောင်း ပေးလိုက် သေးသည်။နေ့လည်ကျတော့ ဖုန်းဆက်လာသည်။ တကယ့် အင်တာဗျူး မဟုတ်။ ၀န်ထမ်းဆိုလို့မိန်းမ နှစ်ယောက်သာ ရှိသည့် အခန်းကျဉ်းလေး။ ရောက်ရောက်ချင်း form ဖြည့်ခိုင်းပြီး သူတို့ ဆီမှာ အလုပ်နှစ်ခုရှိကြောင်း ပြောပြီး ပိုက်ဆံ ၁၂ ဒေါ်လာ တောင်းသည်။ သူကလဲ ပထမဆုံး အတွေ့ အကြုံအလုပ်ကလဲ လိုချင်တော့ ပိုက်ဆံပေးခဲ့သည်တဲ့။ မှားသွားလားလို့ မေးတော့ ကျွန်မ ဘာပြောရမှန်းမသိ။ အလုပ်လိုချင်သူတွေ အတွက် ၀န်ဆောင်ခ ယူ၍ လုပ်ပေးသော တရားဝင် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (အေးဂျင့်) တွေ ရှိသော်လည်း ခုလို မရိုးသား အင်တာဗျူး အယောင်ဆောင်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းတာတော့ ခုမှ ကြားဖူးသည်။လိမ်တာ ဖြစ်ဖို့ များတယ်လို့ပြောလို့ မှ မဆုံးသေး၊ ခုတင် အင်တာဗျူးက ပြန်လာရုံ ရှိသေး အရင်နေ့ က အီးမေးလ် အတိုင်း စာသား တထပ်ထဲနှင့် နောက်တကြိမ် ရောက်လာပြန်သည်။ ပထမတော့ ဒုတိယအကြိမ် အင်တာဗျူးခေါ်သည် အထင်နှင့် ပျော်နေကြသည်။ သူ့ မောင်လေး အီးမေးလ်ကို စစ်လိုက်တော့ သူ့ အတိုင်း အီးမေးလ် တခု ထပ်ရပြန်သည်။ လောဘတက်ပြီး ပို့ ပြီးသားလူလား၊ လာပြီးသားလူလား မသိပဲနှင့် အသဲအသန် ပို့ နေခြင်းပင်။နောက်တနေ့သူ့ မောင်လေးက လိမ်တာ သေချာအောင် သွားလေ့လာသည်။ သူ့ အမတုန်းက လိုပဲ သူတို့ မှာ အလုပ် နှစ်နေရာရှိသည်ဟု လိမ်ပြန်သည်။ မောင်နှမမှန်း မသိ။ ဒီတခါတော့ ကောင်လေးက ဟန်မပျက် form ဖြည့်ပြီး ပိုက်ဆံ ၁၂ ဒေါ်လာ တောင်းသောအခါ မပါလာကြောင်းပြောပြီး မပေးခဲ့။ ဒီတော့ ပိုက်ဆံမပေးရင် သူတို့အလုပ်ရှာမပေးနို်င်လို့ခပ်တင်းတင်း ပြန်ပြောသည်တဲ့။ ကောင်လေးနဲ့အ၀င်အထွက် လာသမျှ မြန်မာတွေ ချည်းပဲဆိုပဲ။မနေ့ ညက ဒီအကြောင်းကို အလုပ်ရှာနေသည့် အသိအမကြီး တယောက်အား ပြောပြ သတိပေးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်က သူ့ သူငယ်ချင်းတယောက်လဲ အဲဒီလို ခံခဲ့ရသည်တဲ့။ company နာမည်က အတူတူ။ သတင်းစာထဲမှာ ဟုတ်တိပတ်တိ တလက်မ ပတ်လည်လောက်နှင့် ကြေငြာတာလဲ အတူတူ။ သူ့ တုန်းက ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးခဲ့ရသည်တဲ့။ မြန်မာတွေကိုသာ ရွေးလိမ်သည်။ အလုပ်လဲ တကယ်ရှာမပေးပါတဲ့။ခုတလော မြန်မာပြည်က အလုပ်လာရှာ သူတွေ လှိမ့်ဝင်လာတော့ သူတို့ လို လိမ်စားနေသူတွေ အတွက်တော့ အကွက်။ တယောက်ကို ၁၂ ဒေါ်လာ။ တနေ့အယောက် ၂၀ ဆို ဒေါ်လာ ၂၄၀။ တလဆို ဒေါ်လာ ၄၈၀၀။ အင်း… အတော်ကို အကြံပက်စက်ပါပေ့။နေရာက China Town ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လှည့်ပတ် ကျက်စားနေသည်။ မဟုတ်တာ လုပ်သူဆိုတော့ တနေရာထဲမှာ အခြေမကျရဲ။တကယ်လို့အသိတွေထဲမှာ အလုပ်ရှာနေသူများ ရှိခဲ့ရင် လက်တို့သတိပေးဖို့ဒီpostလေးကို ရေးလိုက်ရတာပါ။ မြန်မာတွေကို လူလည်ကျ စီးပွားရှာနေသူတွေ အတွက် သင်ခန်းစာပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပါ။ အလုပ်ရှာနေသော မြန်မာ အပေါင်း လိမ်ညာသူတွေနဲ့ကင်းဝေးပြီး ကောင်းမွန်သောအလုပ် အမြန်ဆုံး ရကြပါစေလို့ ….။သူတို့အင်တာဗျူးရှိတယ် ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆီကို ပို့လိုက်တဲ့ Email မူရင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
Subject: RE: Application of Auto Cad Draftsman Post
Date: Fri,7April 2008 19:45:45 +1000
Thanks for your application. In this case, can we see u for an interview onWed Fri/4/08 10.00 am? Please advice.
151 Chin Swee Road #14-09 Manhattan House.
Direction:- Take MRT down to Chinatown station and exit from D. U can go to OG taxi stand there and walk towards the direction of some HDB at Chin Swee Road . Go straight until u can see Seng Siong ….We are just behind Seng Siong. U can ask people around there ..:)
(If u have been here or applied with us before, please do not reapply again)
This post is copy from တန်ခူး
DatE Monday, September 01, 2008 LaveL ထူးခြားသတင်း0comments link this